Waa ka ogoow cudurka Kolestaroolka (Cholesterol)?! - Aayaha
Aayaha editorFebruary 3, 2019
Cudurkaan waxaa loo yaqaanaa “dilaaga aamusan” sababtane waxay tahay calaamado lagu garto ma lahan, waxaa dhici karto calaamadda ugu horreysa inay noqoto, wadna xanuun “Angina”, wadna qabad “Heart Attack”, Faalij “Stroke” ama xanuun murqaha lugta markaa socotid.
Haddii hooyadaa, aabaahaa, walaalahaa ay kolestarool qabaan ama da’daadu ka sarreeyso 50 jir, ama sonkor nooca 2 aad qabto, ama cayilan tahay ama aadan dhaqdhaqaaq samaynin ama sigaar iyo khamri cabto ama astaamaha lagu garto kolestaroolka aad indhaha ku leedahay.
Kolestaroolkaan “wanaagsan”? wuxuu kolestaroolka dheeraadka ah ka qaadaa dhiiggaaga wuxuuna ku celiyaa beerka si markaas jirkaagu uu u awoodo inuu uga takhaluso.
Kolestaroolkaan “xun”? ee dhiiggaaga ku jira wuxuu ku kordhaa marinnada dhiiggaaga. Tani waxay keeni kartaa in marinnada dhiiggaagu ay ciriiri galaan, iyadoo dhibaato gelinaysa socodka dhiigga.
Kani waa kolestaroolka “wanaagsan”?: mar kasta oo ay tiradiisu sarreyso, way ka sii wanaagsan tahay.
Kani waa kolestaroolka “xun”?: mar kasta oo ay tiradiisu hooseyso, way ka sii wanaagsan tahay.
# Xaddid cuntada ay ku jiraan xaddiyo sare oo kolestarool ah iyo dufannada cayriin iyo dufannada polyunsaturated-ka ah, sida hilibka lo’da, farmaajada, iyo caanaha.